Ime akwa ume na-arụ ọrụ dị mfe. Na imepụta akwa ime akwa a na-eji akwa akwa (a na-ejikarị arụmọrụ, na ịcha akwa pụrụ iche), nke nwere ihe ndị pụrụ iche (iwepụ mmiri na ikpuchi ọkụ). Ya mere, mgbe mmadu na-ekpuchi otu ikuku nke ikuku n'etiti akpụkpọ anụ na akwa ahụ, akwa akwa akwa anaghị ekwe ka ọkụ ahụ gbapụ wee jide ya. N'aka nke ya, ọsụsọ nke ahụ na-arụpụta na-eme ka anụ ahụ ghara itinye ya n'ahụ, ma ewepụ ya na akpụkpọ ahụ ma wepụ ya n'enweghị mmefu nke nwoke na ume ya na ikpo ọkụ. N'ọnọdụ a, akwa ejiji nkịtị na-enweta mmiri, na-enye aka na hypmiamia, na akwa ime uwe na-eduga ya n'èzí, mgbe ọ na-ejigide ihe mkpuchi nkwonkwo.
Uru nke ime akwa na-abaghị uru, n'ihi ya ọ bụghị ihe ijuanya na njedebe ya dị elu. Enwere ike ịchọta nhọrọ zuru oke nke ngwaahịa a na ntanetị ahịa ọnụahịa http://priceok.ru/termobele/cid9723, nakwa iji tụnyere ọnụahịa maka ihe nlereanya ị chọrọ.
Kedu ihe ị ga-achọ ịma gbasara ịhọrọ uwe ime akwa?
Ihe mbụ a na-eji ejiji a bụ ihe ahụ. E nwere ọtụtụ ihe, ndị na-emepụta na-eji teknụzụ ọhụrụ meeju mkpa nke onye ọ bụla zụrụ ya. Kedu otu esi ahọrọ akwa ime akwa maka oge dị iche iche?
Owu. Ihe okike kachasị mma maka ejiji kwa ụbọchị, na-ejegharị na ihu igwe oyi, maka azụ azụ oyi, nakwa maka ihi ụra. Ihe a na - ewepu mmiri mmiri, na - eme ka a ghara ikpuchi mmiri. Ma, ọ bụrụ na akpụkpọ anụ ahụ na-achazi, mmiri ga-enwe n'akụkụ ahụ. N'ihi nke a, akwa ime akwa na-adịghị mma na-adabaghị maka ọzụzụ egwuregwu.
Acha. A na-eji akwa akwa eji akwa akwa, ma ị nwere ike izute ụdị ihe ndị ọzọ. Ọ bụghị nanị na ajị anụ na-ekpo ọkụ, ma ọ na-enyekwa mmetụta dị ọkụ. Uwe ejiji akwa na-eme ka ọ dị mma maka njem ogologo, nakwa maka ndị ahụ na-arụ ọrụ na ogologo oge n'èzí.
Synthetics. Polypropylene na polyamide bụ ihe ndị kachasị eme ihe maka mmepụta akwa akwa akwa. Mee ngwa ngwa wepu mmiri, emechila ihe ísì, emela ihe ọ bụla, buru ọdịdị, na-eguzogide ọgwụ. A na-ejikarị emepụta antibacterial impregnations. A na-eji Polypropylene mee ihe maka imepụta akwa ime egwuregwu, ọ gaghị eyi ogologo oge, dị ka ụra n'ime ya, n'ihi na ihe ahụ na-agbaze akpụkpọ ahụ (ọ na-adabara na ahụ ya ma nwee ike ime ka ọ dị ọcha). Mana maka ọzụzụ n'oge oyi bụ nhọrọ kacha mma. Mgbe ụfọdụ, a na-atụgharị "synthetics" na ajị anụ iji melite ihe mkpuchi nkwonkwo.
Ma: synthetics ma ọ bụ eke akwa? Azụ anụ dị mma ma ọ bụrụ na ihe mgbaru ọsọ gị bụ ogologo njem na ogologo oge n'èzí na obere okpomọkụ. Ihe okike ga - arụ ọrụ kachasị - ọkụ. Ọ bụrụ na mgbaru ọsọ gị bụ ọzụzụ ọrụ, nanị synthetics ga-anagide ọrụ bụ isi - iwepu mmiri. N'oge ọzụzụ, ahụ ọkụ dị n'ahụ, ọ bụrụ na mmiri ahụ ga-adịgide adịgide, mgbe ahụ, n'oge ezumike, ahụ ga-amalite ịmalite.
Nzi ziri ezi
Kedu ka kwesiri ime akwa ime ka o na-anọdụ n'elu ahụ? Onye ọ bụla nke na-adịghị amasị akwa ákwà kwesiri ịghọta na uwe ime ala n'efu agaghị enwe mmetụta ọ bụla, n'ihi na ikuku ikuku dị n'etiti ahụ na akwa, bụ nke a na-enweta ihe nnweta thermo-insulating, agaghị adị. Ugboro mgbe, ị nwere ike ịchọta echiche dịka "akpụkpọ anụ abụọ," nke na-akọwa ụkpụrụ nke eji akwa akwa. Ọ ka mma ịzụta obere dị karịa onye ka ibu. Ime akwa mkpuchi kwesiri ime ka ahụ dị mma, na-ezere ọdịiche dị n'agbata anụ ahụ na anụ ahụ.
Ọ dịkwa mkpa ịhọrọ ụdị ndị kwesịrị ekwesị maka oge oyi na oge ọkọchị, nke dị iche na nkpuchi nke ákwà (nnukwu ọkụ na ìhè - maka okpomọkụ, ọkara na ọkụ - maka oge oyi-oge oyi).
Mmepụta nke onye?
Ndị ọrụ na-emepụta akwa akwa, dị nnọọ ukwuu, ma na mba anyị ma ná mba ọzọ. N'ime ụdị ndị nwere aha ọma, MJ Sport, VAUDE, Marmot, Helly Hansen, MILLET, LOWE ALPINE, Ọrụ. Nke a bụ ndepụta nke ụlọ ọrụ sitere na Europe na USA. Maka ndị na-emepụta ụlọ, Bask na RedFox ga-abụ ezigbo nhọrọ.
Nhọrọ nke ime akwa na-adabere n'ụdị ọnọdụ: ma ọ bụrụ na ị na-ejegharị mgbe nile, nhọrọ ị chọrọ bụ akwa akwa na owu, ọ bụrụ na ị bụ onye na-eme egwuregwu, ọ ka mma ịzụta akwa akwa akwa, ma eleghị anya site na mgbakwunye nke akwa anụ, ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịchọta ihe nlereanya maka ọdịdị nke ọ bụla ajị iji nyere gị aka.
Akpanaka a na-ahọrọ nke ọma ga-echebe site na mmiri, ikuku ma ghara ime ka akpụkpọ ahụ dị njọ. Nanị ihe nzaghachi nke akwa ime akwa bụ enweghị njedebe, dịka ụdị uwe dị iche iche chọrọ maka ọnọdụ dị iche iche. Mana, mgbe ị kọwapụtara, n'ọnọdụ ndị ị na-eme mgbe mgbe, nke a na-abaghị uru.
Mkpa! Echefula na akwa akwa anaghị anabata okpomọkụ, n'ihi ya, ọ nwere ike ịsacha ya na okpomọkụ nke ọ bụghị karịa ogo ogo 40, ma anaghịkwa ehicha ma dị ọcha.
Jimmy Choo akpụkpọ ụkwụ
Na-ese ihe na onye snowman
Tunic maka zuru
Uwe ogologo na ala na aka uwe
Ezigbo Joket ụmụ agbọghọ
Uwe a na - ekpo ọkụ - na ihe ị ga - eyi na otu esi emepụta ihe oyiyi ndị na - ewu ewu?
Obere ụkwụ ikiri ụkwụ
Pajamas n'ụdị anụmanụ
Uwe maka ọrụ
Ndị na-akpụ akpụ si na mmetụta
Ọdịdị mma na ìhè
Akwụkwọ akwukwo nri nwere aka aka
Kedu ihe kpatara pink lichen?
Kedu ka esi etinye linoleum?
Ngwunye jeans - onye na-aga na ihe ị ga-eyi na otu esi emepụta ihe oyiyi dị mma?
Onyinye maka Afọ Ọhụrụ nye mama m
Azụ - ụdị na atụmatụ nke ịkọ ihe
Sagittarius na Sagittarius - ndakọrịta na mmekọrịta ịhụnanya
Ndị na-agba ígwè n'oge okpomọkụ n'elu ikpo okwu
Poteto na ite
Kedu ọnọdụ okpomọkụ n'oge ime?
Ekepụta taịl nile na ime ụlọ ịwụ ahụ
Salad nke imeju imeju
Psychology nke nkwurịta okwu na ndị mmadụ
Ihe ịrịba ama mbụ nke oyi
Agate Nkume - Ime Anwansi
Na-alụ ọgụ anwụnta na mpaghara dịpụrụ adịpụ